Trump Oo Ka Cadhooday Sawir La Isku Barbar-dhigay Tirada Dadkii Ka Qayb-galay Dhaarintiisii Iyo Tii Obama | Dhamays Media Group
Trump Oo Ka Cadhooday Sawir La Isku Barbar-dhigay Tirada Dadkii Ka Qayb-galay Dhaarintiisii Iyo Tii Obama
USA (Dhamays) – Warbaahinta dalka mareykanka, ayaa si cadho leh uga jawaabay hadal ka soo yeedhay Madaxweynaha cusub Donald trump.
Madaxweynaha ayaa warbaahinta ku eedeeyay inayna daacad ahayn, ka dib markii ay ka warrameen in dad badan ayna ka qeybgalin munaasabaddii lagu dhaariyay.
Trump ayaa sheegay in 1.5 milyan oo qof ay ka qeybgaleen munaasabadda, balse cadeyn muu bixin. Balse shirkadaha warbaahinta ayaa eedda Trump ku tilmaamay arrin laga cadhoodo oo aan wanaagsaneyn.
Wargeyska The New York Times waxay sheegeen in hadalka Trump uu yahay sheegasho been ah oo aan waxba ka jirin.
Wargeyska The Washington Post ayaa eedaha ku sheegay inuu yidhi Qof aanan si qoto dheer u fikirin oo iska yidhaahda waxyaabo laga xanaaqo.
Donald Trump ayaa yidhi "Waxay u muuqatay in qiyaastii 1.5 milyan oo qof ay joogeen goobta", markii uu hadalka ka jeedinaayay Capitol Hill, Jimcihii.
Sidoo kale, afhayeenkiisa Aqalka Cad ayaa sheegay in "Taageerayaashii abid ugu badnaa ee munaasabad dhaarin ka qeybgala inay ahayd tii Trump".
Labaduba ma keenin caddeyn muujineysa in taageerayaal badan ay joogeen Capitol Hill.
Balse, Sawir ayaa muujiyay sida ay u kala duwan yihiin middii Obama ee 2009-kii iyo Tan Trump ee laba maalin ka hor.
Sawirka waxaa ka muuqdo in dad aad u badan ay joogeen meeshii Obama lagu dhaariyay, halka xilligii Trump goobta ay firaaqo u muuqato.
Daafaaha caalamka waxaa ka dhacayo isu soo baxyo lagaga soo horjeedo maamulka Donald Trump.
Dibad baxa ugu weyn ee gudaha Mareykanka wuxuu ka socdaa magaalada Washington, halkaas oo qiyaastii 500,000 oo qof ay isugu soo baxeen. Sidoo kale, New York waxaa ku dibad baxaya illaa 400,000 oo qof, halka Chicago iyo Los Angelis ay isu soo baxyo ka socdaan.
Ujeedada ayaa ah in la muujiyo in xuquuqda dumarka la dhowro. Qaar ka mid ah dadka abaabulay isu soo baxyada waxay sheegayaan in xuquuqda dumarka ay halis ku jirto inta maamulka Trump uu jiro.
Donald Trump marna kamuu hadal arrinta dibad baxayaasha xilligii uu booqanayay xarunta CIA-da ee Virginia.
Hase yeeshee, wuxuu si kulul u cambaareeyay warbaahinta. Wuxuu sheegay in saxaafadda ay abuureyso khilaaf dhex mara maamulkiisa iyo laamaha sirdoonka.
Madaxweynaha cusub wuxuu ku celiyay aragtida uu ka qabo Weriyayaasha oo uu ku tilmaamay inay yihiin "kuwa ugu daacadnimada xun aadanaha caalamka ku nool".
Sidoo kale, afhayeenkiisa Aqalka Cad ayaa weerar noocaas ah oo afka ah ku qaaday saxaafadda iyo suxufiyiinta.
"Waxaa jira hadallo badan oo ka dhex socda warbaahinta oo ah in Trump cadaaladda la horkeeno, waxaana halkan u joogaa in arrinta labada dhinacba ay noqon karto. Waxaa dooneynaa in saxaafadda aan cadaaladda horkeenno oo la xisaabtanno", ayuu yidhi Spicer.
Laakiin hadalkaasi ka dib wuxuu diiday inuu dhageysto su'aalaha weriyayaashii goobta uu ka hadlay ku sugnaa.
Previous: Tirada Dadka Ku Dhintay Shil Tareen Oo Ka Dhacay Hindiya
Next: Guddoomiyaha Aqalka Sare Ee Soomaaliya Oo Loo Doortay Xildhibaan Ka Soo Jeeda Somaliland